Arivonimamo: mpangarom-paosy saika nodoran’ny olona - ewa.mg
News - Arivonimamo: mpangarom-paosy saika nodoran’ny olona
Hatolotra ny fitsarana ao Arivonimamo, anio ireo jiolahy miisa dimy saika matin’ny fitsaram-bahoaka tao Arivonimamo, omaly. Araka ny fampitam-baovao voaray, nahazo antso avy amin’ny vahoaka ny polisy fa misy olona tratra nangarom-paosy ao an-tsenan’Arivonimamo. Efa saika nodoroan’ny vahoaka ilay jiolahy, soa ihany fa nalaky ny fahatongavan’ny polisy naka azy. Nandritra ny famotorana nataon’ny polisy no nanononany ireo jiolahy atidoha miray tsikombakomba aminy. Nosamborin’ny polisy ireo mpiray tsikombakomba aminy ka samy niaiky ny heloka vitany. Fantatra fa isan’ireo jiolahy nampitondra faisana ny mponina ao Arivonimamo ireo jiolahy tratra ireo.
L’article Arivonimamo: mpangarom-paosy saika nodoran’ny olona a été récupéré chez Newsmada.
Ho an’ity herinandro (26 novambra hatramin’ny 2 desambra) ity, ho avy ny orana eto Antananarivo, manomboka rahampitso. Rivotra mafana ary tsy marin-toerana no mandrafitra ny toetry ny andro mandritra ity herinandro ity. Maina ny andro ny amin’ny ilany atsinanana ao anatin’ny roa na telo andro ho avy. Hanorana mety arahin-kotroka ny faritra sisa. Ho maina kosa ny faritra atsimo, ny faran’ny herinandro. Raha ny mari-pana indray, hisy fidinany ny maripana ambony amin’ny roa ampahatelon’ny avaratry ny nosy. Ny mari-pana ambany dia eo anelanelan’ny 16 ka hatramin’ny 26°C ary ny mari-pana ambony ao anatin’ny 27 ka hatramin’ny 37°C. Notanterahina ny talata teo, tao Ambositra, ny atrikasa mahakasika ny tetikasa Fafy ho an’ny distrika. Nahatratra 124 ireo mpizaika ka nahitana ireo ben’ny Tanàna rehetra, ny lehiben’ny mpitsabo eny amin’ny CSB ary ireo fikambanana miantsehatra eny anivon’ny kaominina sy fokontany. Raha tsiahivina, mitana ny laharana fahaefatra maneran-tany amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka i Madagasikara (ENS OMD:47,3 %) ary misy fiantraikany mivantana amin’ny fianakaviana sy ny fiarahamonina, eny fa hatramin’ny fampandrosoana ny firenena izany. Anisan’ireo faritra misitraka izao tetikasa izao ny faritra Amoron’i Mania ka ny kaominina rehetra miisa 61 no hiasana mandritra ny dimy taona voalohany. L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Fanahiana korontana sy fihoaram-pefy: hiatrana sy handray ny fepetra rehetra ny Emmo/Reg
Horaisina ny fepetra. Ho rakotra mpitandro filaminana manerana ny tanàna, anio, ary efa nanomboka, omaly izany. Anisan’ny hanaovana andrimaso manokana ny etsy Ambohidahy sy ny manodidina amin’izao hamoahan’ny HCC ny voka-pifidianana izao. Mazava ny fanambarana. “Nohamafisina ny fitandroana ny filaminana, nanomboka androany (omaly), iray andro mialoha ny hamoahan’ny HCC ny voka-pifidianana. Nampiana ny isan’izy ireo”, hoy ny lehiben’ny Emmo/Reg, ny Kly Randrianarivelo Anicet, omaly. Anisan’ny antony nandraisana izany fepetra izany, ireny hetsika tato ho ato teny Ambohidahy sy ny nahamay fiara ireny ary koa ny fanambarana samihafa, araka ny nambarany. “Tsy maintsy noraisina ny fepetra manokana ankoatra ny asa andavanandro. Tsy eny amin’ny HCC ihany fa manerana ny tanàna satria betsaka loatra ny tsaho miely sy ny fanentanana ataon’ny sasany. Tsy maintsy atao izany mba tsy hisian’ny fihoaram-pefy… Aoka anefa ho tony isika eo am-piandrasana ny voka-pifidianana ara-dalàna havoakan”’ny HCC ”, hoy ihany izy. Etsy andaniny, ho tapaka ny ampahan-dalana sasany eny Ambohidahy sy ny manodidina ho an’ny anio maraina tontolo. Synèse R. L’article Fanahiana korontana sy fihoaram-pefy: hiatrana sy handray ny fepetra rehetra ny Emmo/Reg a été récupéré chez Newsmada.
Asan-jiolahy eny Ivandry :: Noravaravain’ny polisy ireo andian-jiolahy mpamaky trano
Minitra vitsy monja taorian’ny fanafihan-jiolahy ny tokantrano iray teny Ivandry, tamin’ny alin’ny alakamisy lasa teo, dia voasambotry ny polisy avy eny Analamahitsy ireo jiolahy. Hita tany amin’ireo telo lahy voasambotra voalohany ny vilany, ny menaka, sy solosaina fitondra mandeha avy nangalarin’izy ireo. Tafiditra tao anatin’ny fepetra nataon’ireo mpitandro filaminana hiantohana ny fandriampahalemana ao anatin’ny faritra fehezin’ireo polisy ireo jiolahy ka noraisim-potsiny. “Nisy fotoana somary niakatra ny vaky trano tao amin’ny faritra Soavimasoandro. Nandray fepetra izahay rehefa nahita izany. Rehefa tsy afa-nihetsika tany Soavimasoandro ireo jiolahy dia nisy tsaho niely indray tany Alarobia hoe ho avy any izy ireo. Napetraka ny paikady namehezana toerana maromaro fa tsy Alarobia irery. Kinanjo tany Ivandry ireo jiolahy no nanao ny nataony tamin’io alina io. Noraisim-potsiny ny telo tamin’izy ireo niaraka tamin’ireo entana halatra, minitra vitsy taorian’ny fanafihana. Nanoro ireo namany roa hafa efa niandry tany amin’ny Petite vitesse izy ireo rehefa voasambotra. Nalain’ny polisy tany ireo roa lahy hafa tamin’io alina io ihany”, hoy ny fanazavana avy amin’ny pôlisy eny Analamahitsy. Mbola misy naman’izy ireo karohina. Raha tsy misy ny fiovana amin’ny ora farany dia hatolotra ny Fitsarana, anio izy dimy lahy voasambotra ireto. L’article Asan-jiolahy eny Ivandry :: Noravaravain’ny polisy ireo andian-jiolahy mpamaky trano est apparu en premier sur AoRaha.
Me Razafinjatovo Willy: “Ilaina ny fahasahiana”
“Apetratsika amin’io lalàna io ny hoe: tsy misy fanavakavahana fa vandana avokoa izay kary. Eo izany no mahatonga ny olona hieritreritra hoe: manana fahasahiana amin’ny fanatanterahana izany tokoa ve ny mpitsara sy ny tomponandraikitra mivantana amin’izao zavatra izao?” hoy ny mpahay lalàna, ny Me Razafinjatovo Willy, momba ny lalàna navoakan’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny alalan’ny didy hitsivolana ny amin’ny fakana fananana sy fanagiazana tahirim-bola tsy ara-dalàna. Noho izany, mila olona manana fahasahiana sy fahitsiana.Raharaham-pirenena io ary samy Malagasy isika ka aoka ao anatin’ny fahamarinana no hanaovana azy. “Ny faniriako: mba azo hampiharina na amin’ny heloka vita tany aloha aza izao lalàna izao”, hoy izy. Toy ny hoe mihalangalana fotsiny ny mpanao ratsy teo aloha teo, na falifaly fa tsy mahakasika azy ireo izany. Mba hahazoana manenjika ireo rehetra nanao tsy rariny izany fa mora fantatra ireny olona ireny.Mba tsy ho tapatapaka amin’ny fivoriana ireo solombavambahoakaFaniriany ny tsy ho tapatapaka amin’ny fahatongavana manatanteraka ny asany ireo solombavambahoaka. Mandrebireby fotsiny raha tapatapaka amin’ny asany izy ireo, mandany volam-panjakana, mamitaka ny vahoaka nifidy azy.Ny tadiavin’ny olona: ho eo isan’andro ireo solombavambahoka rehefa misy lalàna avoaka, araka ny nambarany.R. Nd.L’article Me Razafinjatovo Willy: “Ilaina ny fahasahiana” a été récupéré chez Newsmada.
IFM: handray ny « Festival Nosy-Be symphonies »
Hoentina ao amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny 31 aogositra izao, ny « Festival Nosy-Be symphonies », hetsika miompana tanteraka amin’ny mozika klasika. Iraisam-pirenena ity « festival » ity, hany ka maro ny mpanakanto vahiny ho tonga haneho ny talentany.Anisan’izany ry Elzbieta Dedek, mpitendry piano; i Karol Sosinski, mpitendry angorodao ary i Jakub Muszynski, mpitendry angorodao ihany koa. Tsy ho latsa-danja amin’izany ny mpanakanto malagasy izay mihamaro hatrany ireo misongadina eo amin’ity sehatry ny mozika klasika ity.Raha tsiahivina, « festival » tokana fanao any Nosy-Be isan-taona ny « Nosy-Be symphonies ». Hetsika iray tafiditra ao anatin’ny fampiroboroboana ny tontolon’ny fizahantany aty amin’ireo Nosy amin’ny ranomasimbe Indianina izy ity. Araka izany, sehatra ihaonan’ireo mpanakanto manan-talenta sy ny mankafy mozika klasika ny « Festival Nosy-Be symphonies ».Nanomboka ny taona 2014 ny andiany voalohany. Izany hoe, andiany fahadimy ny notanterahina tamin’ny taon-dasa. Tsy vao izao fa efa tamin’ny taon-dasa no nentina eto an-dRenivohitra ity « festival » ity, nandritra io andiany fahadimy io. Efa tafiditra ho anisan’ireo hetsika voalohany sady goavana mahakasika ny mozika klasika, aty amin’ny ranomasimbe Indianina, izy.Landy R. L’article IFM: handray ny « Festival Nosy-Be symphonies » a été récupéré chez Newsmada.
Manomboka miditra amin’ny maitsoahitra isika. Tsy misy intsony latsaky ny 2 000 Ar ny vidin’ny kilaon’ny vary eto amintsika.Nisondrotra ny vidim-bary nanomboka ny herinandro lasa teo. Raha ny eny amin’ny manodidina an’Itaosy, efa tafakatra 650 Ar hatramin’ny 800 Ar ny kapoakan’ny vary makalioka, izany hoe, tafakatra 2 300 Ar ny hatramin’ny 2 800 Ar ny iray kilao, raha 1 900 Ar hatramin’ny 2 100 Ar ny tany aloha. Eto an-dRenivohitra, manodidina 2 300 Ar hatramin’ny 2 400 Ar ny iray kilao amin’ny makalioka, raha 2 200 Ar hatramin’ny 2 400 Ar ny vary gasy mena raha 1 800 Ar hatramin’ny 2 000 Ar ny tany aloha.Mahatratra 2 100 Ar kosa ny kilaon’ny vary hafarana avy any ivelany (stock) raha 1 800 Ar tany aloha.Miditra amin’ny maitsoahitra isika izao, mihena ny famatsiana sakafo ary tsy maintsy hitohy hiakatra ny vidiny.Tsotra ny tenin’ny mpaninjara, nisondrotra ny vidiny hakan’izy ireo ny vary any amin’ny mpamongady. Vidiana 110 000 Ar ny iray gony 50 kilao (2 200 Ar/kg) amin’ny vary makalioka, ary 100 000 Ar hatramin’ny 110 000 Ar ny vary gasy. Manodidina ny 100 Ar isaky ny kilao ny tombombarotra alain’izy ireo.Ahina hiakatra koa ny sakafo ilaina andavanandro hafa, indrindra izay hafarana avy any ivelany ny ankamaroany, nefa tsy maintsy vidiana amin’ny vola vahiny. Nisanda 4 559 Ar ny 1 euro, omaly, ary efa tafakatra 4 661 Ar ny 27 oktobra 2020 teo. Vidiana 3 846 Ar kosa ny 1 dolara, omaly, raha efa 3 951 Ar ny 28 oktobra 2020 teo.Njaka A.L’article Midangana ny vidin-javatra: tafakatra 2 800 Ar ny kilaon’ny vary makalioka a été récupéré chez Newsmada.
Mahazo vahana tato ho ato ny fihanaky ny zava-mahadomelina eto amin’ny firenena. Porofon’izany ny nahatraran’ny polisy, ireto roa lahy mpanao trafikana héroïne, teny amin’ny faritra 67 ha, afakomaly. Naiditra am-ponja avy hatrany, omaly izy ireo, taorian’ny nanolorana azy teny amin’ny fampanoavana.Voasambotry ny polisy miady amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina (Stup) Anosy, afakomaly teny amin’ny faritra 67 ha tokony ho tamin’ny 1 ora tolakandro ireto voarohirohy ireto. Loharanom-baovao no nahafahan’ny polisy nanenjika ireto mpanao trafikana zava-mahadomelina ireto. Nohamafisin’ny polisy fa tafiditra hatrany amin’ny fanenjehana ataon’ny polisin’ny Stup amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina, izay mitarika fitondran-tena tsy mendrika eny anivon’ny fiarahamonina ny fisamborana ireto roa lahy ireto. Nahazo angom-baovao ny polisy fa hoe mihaodihaody any 67ha izy roa lahy miaraka amin’ireto zava-mahadomelina ireto. Niroso tamin’ny fametrahana ny vela-pandrika sy ny fanarahan-dia ny polisy ka tratra tany amin’izy ireo ny héroine milanja 1,23grama. Araka ny fantatra nandritra ny famotorana azy ireo fa 50 000Ar ny vidin’ny iray grama ka tsinjarain’izy ireo ho fito izany, amidiny 5 000Ar ny iray. Niaiky ny heloka vitany izy ireo.Mirongatra ny zava-mahadomelina amin’izao…Saika isan’andro andrenesana mpivarotra rongony tratran’ny polisy sy ny zandary. Vao afakomaly teny Androndrakely akaikin’ny sekoly iray eny an-toerana roa lahy tratran’ny polisy noho ny fivarotana rongony sy toaka. Fantatra fa mivarotra rongony amin’ny mpianatra ry zalahy ireto. Nosamborin’ny polisy ireto jiolahy ireto ary mbola nahatrarana rongony sy toaka gasy dimy litatra tany amin’izy ireo. Efa nampidirana am-ponja ihany koa izy ireo rehefa avy natolotra ny fampanoavana.Vao haingana koa ny zandary no nandoro ireo rongony milanja efa ho roa taonina mahery tany amin’ny faritra Atsimo, ankoatra ireo efa nogotana teny an-tanimboly amina velaran-tany hekitara maro. Efa betsaka izay rongony tratra sy olona naiditra am-ponja izay fa toa miditra ny fonja izay tratra dia iny misy mipoitra indray. Ny fiparitahan’ireny zava-mahadomelina ireny anefa no isan’ny mampirongatra koa ny herisetra, eny tonga hatrany amin’ny fanolanana ankizy tsy ampy taona mihitsy aza izany. Sao tokony hanaovana hetsika manokana mihitsy ity ady amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina ity?Jean ClaudeL’article Mihanaka ny zava-mahadomelina: Roa lahy mpanao trafikana héroïne nidoboka am-ponja a été récupéré chez Newsmada.